सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, कतिमा खुल्छ कारोबार ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२९ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकरण भएको छ । अब बुधबारबाट यसको सेयर कारोबार खुला हुनेछ । नेप्सेले यसको ओपनिङ रेन्ज पनि तोकेको छ । जसअनुसार पहिलो कारोबार न्यूनतम १३८ रुपैयाँ ७९ पैसादेखि अधिकतम ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसाभित्र रहेर हुनेछ । सिएचडीसी संकेतमा यसको कारोबार खुला हुनेछ । सीइडीबीको चुक्ता पुँजीका आधारमा कायम कुल ८३ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर सूचीकरण गरिएको हो ।
← ‘सीजी नेट’, माग गरिएको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइने !
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २६ जेठ २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं →
वर्ष को अन्तिम दिन नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड : २०७८ मा यी समूहका सूचकहरुमा अझै माथि जाने संकेत
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:४२ Basanta Khanal	0
आज काठमाडौंको यी क्षेत्रमा लोडसेडिङ् हुने